Sidee loo sameeyaa wax aan la arki karin? Wax kasta oo ku yimaada waxbarashada rasmiga ah waxay inta badan ka muuqdaan nidaamyadayada (shahaadada, dibloomada), laakiin waxa lagu helo xaalado aan rasmi ahayn iyo kuwa aan rasmi ahayn inta badan lama maqal ama lama arki karo.
Ujeedada calaamadda furan waa in la bixiyo qalab lagu aqoonsanayo qofka taas oo suurtogal ka dhigaysa in la muujiyo waxbarashadooda aan rasmiga ahayn, laakiin sidoo kale xirfadahooda, guulaha, ballanqaadyada, qiyamka iyo himilooyinka.
Caqabaddeeda: in lagu xisaabtamo aqoonsiga aan rasmiga ahayn ee ka dhex jira bulshooyinka ku dhaqma ama dhulka iyo si loo abuuro nidaam deegaan oo aqoonsi ah.
Koorasku wuxuu sahaminayaa fikradda "aqoonsiga furan": sida loo furo helitaanka aqoonsi ee dhammaan. Ma aha oo kaliya in lala hadlo dhammaan kuwa, xitaa aan aqoonin, jecel yihiin in ay hirgeliyaan mashruuc aqoonsi oo leh calaamado furan, laakiin sidoo kale dadka doonaya in ay wax badan ka bartaan mawduuca.
Mooc-kan, tabarucaadka beddelka ah, waxqabadyada la taaban karo, markhaatiyada mashaariicda dhulka iyo doodaha madasha, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad dhisto mashruuc aqoonsi oo u dhow wadnahaaga.
BAASHADA: aqoonso oo la kaasho calaamado furan Diisambar 8, 2021Tranquillus
READ Dhamaadka DIRECCTE: laga bilaabo Abriil 1, 2021, kormeeraha shaqada waxaa la hoos geeyay awoodda DREETS
horeMaareynta Tayada ee shaybaadhka bayolojiga caafimaadka
socdaDhaqaale bulsho iyo midnimo